Umaka: ukuqapha komphakathi
Isikhathi sokufunda: <1 iminithi I-CRM Yezenhlalo ingelinye lalawo magama athambekele ekusetshenzisweni ngokweqile futhi adideke. Kubukeka sengathi cishe yonke inkampani enezici zomphakathi isiqalile ukuhlukanisa izicelo zayo endaweni ye-Social CRM. Ngokubona kwami, kunezici eziningana okufanele inkundla yezenhlalo ibe nazo ngaphambi kokuzibiza nge-Social CRM: Monitoring - ikhono lokuqapha ezenhlalo ngesikhathi sangempela nokusetha izexwayiso. Umazisi - ikhono lokuthwebula i-
Isikhathi sokufunda: 2 imizuzu Ezweni lanamuhla lezenhlalo, ukuhlanganisa ndawonye lokho okushiwo yikhasimende kubaluleke kakhulu kumikhiqizo. Ubungqabavu bungaba ithuluzi eliwusizo kulokhu okuqukethwe. Ithuluzi le-Attitude's analytics text likhipha amaqiniso, ubudlelwano, kanye nemizwa evela ku-labyrinth yezimpendulo ezitholakele maqondana nomkhankaso wokuphromotha, i-tweet, isibuyekezo se-Facebook, okuthunyelwe kwebhulogi, izimpendulo zenhlolovo - kahle, uthola ukukhukhuleka! Injini yokukhipha amandla isebenzisa imigomo yolimi evivinywe ngesikhathi semvelo futhi
Izindlela ezintathu ezilula zokuqala ukuqapha umkhiqizo wakho ku-inthanethi
NgoLwesihlanu, January 22, 2010 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 UMichael Reynolds
Isikhathi sokufunda: 2 imizuzu Uma ubulokhu ulandela izitayela zemidiya yokuxhumana nabantu, kungenzeka ukuthi uzwile okuningi ngokujoyina "ingxoxo" nokuthi ungabamba iqhaza kanjani. Kungenzeka futhi ukuthi usizwile isexwayiso esithi: "abantu bakhuluma ngenkampani yakho noma ngabe ukhona noma cha". Lokhu kuyiqiniso impela futhi kuyisizathu esihle sokugxumela ezinkundleni zokuxhumana bese uqala ukubamba iqhaza. Uma uyingxenye yengxoxo, ungaphendula imibuzo, ulawule umonakalo, futhi
Okudlule 1 2 3
Ikhasinkomba 3 of 3